[Dosa Di Atas Dosa] Gadis 24 Tahun Bungkus & Campak Bayi Luar Nikah
ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်နေခြင်းကို ထပ်မံ၍ ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက်
Kenyataan Media: Rakaman video menggambarkan keganasan UMNO menghalang ceramah KEADILAN di Sri Stulang, Johor Bahru
Nallakaruppan Pula Ditimpa Haramjadah: Gagal Dalam Rayuan Kes Saman Fitnah Anwar
Dog Attends Church Looking For Master
Prospective Employee Assessment *joke*
Posted: 22 Jan 2013 01:30 AM PST
Posted: 22 Jan 2013 08:58 AM PST
Posted: 22 Jan 2013 07:37 AM PST
"Kenapa baru sekarang setelah nyawa BN berada di keronkong, baru nak tunjuk duit ada.
"Orang Kelantan dah faham. Jambatan Sultan Yahya ke dua pun sudah berapa lama tak siap.
"Tiada kerajaan di dunia ini yang tidak membuat projek. Komunis ada projeknya, kapitalis ada projek cara dia.
"Dalam PRU 12, Selangor jatuh ke tangan Pakatan Rakyat (PR) dari Barisan Nasional (BN). Selangor bermacam-macam projek ada, bermacam-macam universiti ada, bermacam-macam orang kaya ada, tetapi BN tetap kalah di situ," ujarnya lagi.
"Saya yang dengar lebih seronok dari dia yang menyaman Utusan Malaysia. Bukan masalah Anwar, tetapi saya benci kepada pengelapan berita.
"Tiada hak manusia untuk menyekat maklumat yang sebenarnya. Apabila digelapkan berita manusia tidak akan berkembang," tegasnya Ujarnya lagi, setiap manusia perlu didedah pelbagai maklumat khususnya pelajar university bagi menghadapi persaingan.
"Islam tidak pernah sekat maklumat.
Orang yang tidak mahu mendedahkan maklumat mereka ingin menjadi tuhan dengan mengambil alih kerja tuhan, ini celaka besar. Kerana itulah timbul fahaman komunis dan kapitalis," ujarnya lagi. -HD
Posted: 22 Jan 2013 06:05 AM PST
မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာသာဝင်များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြား
ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်၍ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများ
ဆောင်ရွက်နေခြင်းကို ထပ်မံ၍ ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာချက်
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ကွဲပြားခြားနားသည့် ဘာသာ၊ သာသနာအယူဝါဒများကို လက်ခံ၊ ကျင့်သုံး၊ လိုက်နာလာခဲ့ကြ သည်မှာ နှစ်ရာစုပေါင်း များစွာ ရှိခဲ့ချေပြီ။ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများ ရေးဆွဲ ပြဌာန်းခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာသာသနာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာသာသနာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာသာသနာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သောဘာသာတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကိုးကွယ်ရာဘာသာများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ပြဌာန်းထားသည်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိ ရပေသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မကြီး ၃၆၁ နှင့် ၃၆၂ တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ
၃၆၁။ နိုင်ငံတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကို နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားအများဆုံး ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သော ဂုဏ်ထူးဝိသေသ နှင့်ပြည့်စုံသည့် ဘာသာသာသနာဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုသည်။
၃၆၂။ နိုင်ငံတော်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာသာသနာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာသာသနာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာသာသနာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သော ဘာသာတို့ကို ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အာဏာတည်သောနေ့၌ နိုင်ငံတော်တွင်ရှိနေကြသော ကိုးကွယ်ရာဘာသာများဟူ၍ အသိ အမှတ်ပြုသည်။
ထို့ကြောင့် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများ ပြဌာန်းခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံ သားများအနေနှင့် ၎င်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အထက်ဖော်ပြပါ ဘာသာတရားများအနက်မှ မည်သည့် ဘာသာတရားကိုမဆို လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်၊ လိုက်နာ၊ ကျင့်သုံးခွင့်ရှိကြောင်း သိရှိရပေသည်။ ထို့ပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း၊ အပိုဒ် (၁၈)တွင်လည်း အောက်ပါအတိုင်း ပြဌာန်းထားပေသည်။
"လူတိုင်းတွင် လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ကြံဆနိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ခံယူရပ်တည်နိုင်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ သက်ဝင်ကိုးကွယ်နိုင်ခွင့် ရှိသည်။ အဆိုပါ အခွင့်အရေးများ၌ မိမိကိုးကွယ်သည့်ဘာသာကို သို့တည်းမဟုတ် သက်ဝင်ယုံကြည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့် ပါဝင်သည့်အပြင် မိမိတစ်ယောက်ချင်းဖြစ်စေ၊ အခြားသူများနှင့် စုပေါင်း၍ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူအများ ရှေ့မှောက်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ရှေ့မှောက်တွင် မဟုတ်ဘဲသော်လည်းကောင်း၊ မိမိ ကိုးကွယ်သောဘာသာကို သို့တည်းမဟုတ် သက်ဝင်ယုံကြည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ သင်ပြနိုင်ခွင့်၊ ကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်၊ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်နှင့် ဆောက်တည်နိုင်ခွင့်တို့လည်း ပါဝင်သည်။"
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချို့နေရာဒေသများ၌ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ မုစ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်စာတမ်း၊ လက်ကမ်းကြေညာ စာ ရွက်များ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေခဲ့ကြခြင်း၊ ဥပဒေဆန်ဆန် အမိန့်ကြေညာစာများ ထုတ်ပြန်နေခဲ့ကြခြင်း၊ အချို့မီဒီယာများဌာနများမှ မသုံးနှုန်း ထိုက်သည့် အသုံးအနှုန်းများကို သုံးနှုန်းနေခြင်းနှင့် မခိုင်လုံသော သတင်းများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြနေကြခြင်း၊ တရားဓမ္မပွဲများ၌ မိမိသက်ဝင်ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားနှင့် အလျဉ်း မသက်ဆိုင်သည့် အစ္စလာမ့်ဆန့်ကျင်ရေး၊ မုစ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး စကားများကို တရားသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဟောပြော ပို့ချနေခြင်းတို့ကို ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် လေ့လာ တွေ့ရှိရပေသည်။ ထိုသို့ အစ္စလာမ် ဆန့်ကျင်ရေးများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းသည် သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ဘာသာတရား ကွဲပြားခြားနားသော ပြည်သူများအကြား အမုန်းတရား များကို ဖြစ်ထွန်းလာစေ၍ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းများ ပေါ်ပေါ်လာရန် အကြောင်းတရားများကို ဖန်တီးနေကြပေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များသည် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများ ရေးဆွဲပြဌာန်း ခဲ့သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်နေပေသည်။
သို့သော် အထက်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်၍ ထိုသို့သောလုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်နေသောသူများအား အောက်ခြေရှိ အုပ်ချုပ်သူ အာဏာပိုင်များအနေနှင့် ထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်းမပြုပဲ မသိကျိုး ကျွန်ပြု၍ နေကြပေသည်။ သို့ပါ၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ယင်းပြဌာန်းချက်ကို ချိုးဖောက်နေကြသည့် ထိုသို့သော အုပ် ချုပ်သူ အာဏာပိုင်များအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါရန်နှင့် ယခုကဲ့သို့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြား ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်၍ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာ့မုစ်လင်မ်လူထုကြီး တစ်ရပ်လုံးမှ ထပ်မံ၍ ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လိုက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အစည်းအရုံးမှ လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်ကလည်း ဤသို့ အလားတူ ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း အစိုးရအာဏာပိုင်များမှ မည်သို့မျှ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ သို့ပါ၍ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ၎င်း၏ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအနေနှင့် ယင်းကဲ့သို့သော ရာဇ၀တ်မှုများကို ကျူးလွန်နေကြသောသူများကို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပဲ ပြင်းထန်စွာ ထိထိရောက်ရောက် တရားဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူပေးပါရန် မြန်မာ့မုစ်လင်မ်လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ကိုယ်စား ကျွန်ုပ်တို့မှ လေးလေးနက်နက် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ အကယ်၍ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သည့် အစိုးရမှ အထက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးနေကြသည့် တရားခံများအား ဥပဒေအရ ထိထိရောက်ရောက်၊ လျှင်လျှင်မြန်မြန် ဖော်ထုတ်၍ အရေးမယူခဲ့ခြင်းကြောင့် အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိနေသော ရာဇ၀တ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်များအတွက် ဦးသိန်းစိန်နှင့် ၎င်း၏ အစိုးရအာဏာပိုင်တို့၏ တာဝန်သာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း လေးလေးနက်နက် ထပ်မံ၍ အသိပေး ကြေညာလိုက်ပါသည်။
E-mail: paletwa@yahoo.com, presidentbmyfhraj@gmail.com
PDF ဖိုင်ဖြင့် ဒေါင်း၍ ဖတ်လိုသူများအတွက် လင့်ခ်များ
Meredith Carpenter and Lillian Fritz-Laylin, two Molecular and Cell Biology graduate students at UC Berkeley who blog at NCBI ROFL wrote about research findings of how Pornographic Picture Processing Interferes with Working Memory Performance.
"Some individuals report problems during and after Internet sex engagement, such as missing sleep and forgetting appointments, which are associated with negative life consequences.
In this study, 28 healthy individuals performed4experimental manipulations ofapictorial 4-back WM task with neutral, negative, positive, or pornographic stimuli.
Participants also rated 100 pornographic pictures with respect to sexual arousal and indicated masturbation urges previous to and following pornographic picture presentation. Results revealed worse WM performance in the pornographic picture condition of the 4-back task compared with the three remaining picture conditions.
Furthermore, hierarchical regression analysis indicated an explanation of variance of the sensitivity in the pornographic picture condition by the subjective rating of the pornographic pictures as well as byamoderation effect of masturbation urges.
Results contribute to the view that indicators of sexual arousal due to pornographic picture processing interfere with WM performance.
Findings are discussed with respect to Internet sex addiction because WM interference by addiction-related cues is well known from substance dependencies."
CLICK HERE for details of the research.'
Another interesting report: Could watching porn before working out improve men's weightlifting performance?
I took my blog off the internet for about 30 minutes this evening because the MYSTERIOUS reader who scans my blog unceasingly is back again. Those of you who are not aware of this thorn in my blog can read more HERE and HERE.
This time using:
Browser: Safari 7.0.0.296
Screen Resolution: 800x480 [24 bit]
User Agent: Mozilla/5.0 (BlackBerry; U; BlackBerry 9860; en) AppleWebKit/534.11 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.0.296 Mobile Safari/534.11
But using FIVE different IP addresses for the five pages read. The computer ID is the same and the first time IP is the same.
I must congratulate this reader for the effort he/she put in to change the IP address. Thanks to your bizarre reading habits and weird practices, I have become more vigilant.
As always, please write to me at writetomws@hush.ai and tell me:
c) why are you scanning my blog?
d) and why do you always scan my blog each time I write sth more 'controversial' such as the post on Are We Ready for Diversity in Opinion?
Well, this is the record for this evening:
1. at 8:04:31p.m.
First Time IP: 203.82.66.201
Last Time IP: 206.53.152.169
Computer ID: b7f24c40aa3db3ed8383cca65c069fc3
2. at 7:54:49p.m.
Last Time IP: 206.53.152.173
3. at 7:51:22p.m.
Last Time IP: 206.53.152.167
4. at 7:48:50p.m.
Last Time IP: 206.53.152.171
5. at 7:47:49
Last Time IP: 206.53.152.168
Posted: 22 Jan 2013 05:49 AM PST
"Berapa banyak perhimpunan anda anjurkan sebelum mereka menerima mesej? Tetapi saya tidak menolak kemungkinan, tolong jangan silap faham.
"Ia benar-benar bergantung kepada respon yang kami terima akan tetapi buat masa ini masih belum ada rancangan untuk menganjurkan perhimpunan," katanya kepada pemberita disini.
"Rancangan kami adalah untuk turun kebawah, sampaikan mesej tentang pentingnya turun mengundi dan memastikan pemantau kami bersedia," kata Ambiga merujuk kepada PEMANTAU Bersih 2.0.
Posted: 22 Jan 2013 03:08 AM PST
Imagining tiny creatures infiltrating human brains is creepy enough. But Marion Vittecoq knows she has been invaded. Her inner companions may be just hanging out — or they may be subtly changing her personality, manipulating her behavior or altering her risk of disease. Yet she doesn't sound particularly upset.
She doesn't see it as an extra-ordinary intrusion. The parasite has wormed its way into an estimated one-third of people on the planet. In France, where Vittecoq works at bothaCNRS national research lab in Montpellier and the Tour du Valat research center in Arles, nearly one-third to about one-half of adults carry hitchhiking T. gondii. CNRS research colleague Frédéric Thomas is also infected, and also doesn't fret about it.
In the United States, almost one in four residents over the age of 12 has the infection. In other parts of the world, rates are as high as 95 percent. An unlucky minority of these infected people become quite ill. Most, however, don't even know that their muscles and brains carry the parasite.
What exactly T. gondii is doing while it lurks in so many people is an important question for public health. It's also an alluringly spooky question. "Where science meets science fiction" is how Michael Dickinson of the University of Washington in Seattle describes studies of parasites that hack into their hosts' nervous systems. The Journal of Experimental Biology, where Dickinson serves as an editor, dedicated its Jan. 1 issue to this emerging field, dubbed "neuroparasitology." In those pages and elsewhere, clues to T. gondii's bizarre biology are emerging. And growing evidence suggests that the hidden parasite may have visible effects.
Studies comparing the infected and the noninfected raise the possibility that the parasite tweaksaperson's personality or ups the risk of suicide attempts, brain cancer and schizophrenia. Studies in people even report links between T. gondii and traffic accidents, greater odds of having sons than daughters, extra height and unusual opinions about the smell of urine.
Posted: 22 Jan 2013 03:29 AM PST
Tidak ada perkataan yang selayaknya diberi selain "pengkhianat negara" untuk mantan Perdana Menteri, Tun Mahathir Mohamad kerana memberi taraf kewarganegaraan kepada ratusan ribu Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Sabah semata-mata untuk mempertahankan survival Barisan Nasional (BN) di negeri itu.
Ia dibuktikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) terhadap projek "IC Mahathir" yang didedahkan baru-baru ini.
Sambil menyatakan rasa kesal dan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan UMNO-BN itu, Pengerusi DAP Sabah, Jimmy Wong Sze Phin berkata, parti pemerintah itu harus bertanggungjawab terhadap 'dosa' silam mereka ke atas rakyat Sabah.
"Saya boleh katakan bahawa ini merupakan pengkhianatan tertinggi buat Malaysia khasnya rakyat Sabah.
"Bayangkan selama ini yang menentukan hala tuju, pentadbiran negeri Sabah ditentukan oleh 'pengundi hantu' yang dihalalkan. BN benar-benar kotor!" tegas beliau ketika ditemui semalam.
Tambahnya, akibat daripada "Projek IC Mahathir", rakyat Sabah terutamanya di kalangan Bumiputera negeri itu ketinggalan disebabkan saingan tidak sihat yang berlaku.
"Mereka tertindas akibat ketamakan kuasa BN," katanya yang juga ADUN Sri Tanjung.
Menurut Setiausaha DAP Sabah, Dr Edwin Bosi pula, isu "Projek IC" ini telah lama terbongkar sejak 1970-an di mana Ketua Parlimen DAP, Lim Kit Siang ketika itu pernah memberi amaran kepada rakyat Sabah mengenai isu yang kini heboh diperkatakan.
"Kini kita dilaporkan dengan sejumlah 1.8 juta PATI yang mendapat kerakyatan mudah. Semua ini terbukti dengan RCI, kita boleh lihat ramai di kalangan warganegara Filipina, Indonesia, Pakistan dan India mendapat kerakyatan," ujar beliau.
"Tetapi isunya kini bukan saja di Sabah. Sejak Pilihan Raya Umum 2008, peningkatan daftar pengundi di Selangor secara mendadak sebanyak 22 peratus berbanding purata 16.3 peratus di seluruh negara.
"Sebanyak 31,294 pengundi dilaporkan telah dipindahkan dari kawasan Parlimen dan DUN asal mereka tanpa mereka sedari,"
Posted: 21 Jan 2013 11:34 PM PST
Hari ini kami tampil dengan3rakaman video insiden tersebut.
Kami pada mulanya tiba sekitar jam 8.30 malam dan berjalan ke flat apabila dihalang kumpulan berpakaian baju UMNO / BN. Mereka enggan membenarkan kami masuk ke dalam sekalipun program kami telah dirancang terlebih awal. Mereka turut mengeluarkan makian dan kata-kata kesat terhadap kami.
Kemudian dengan ditemani teman-teman daripada KEADILAN Pasir Gudang dan Gelang Patah serta PAS bersama-sama pihak polis, kami masuk semula ke tapak ceramah untuk mengambil peralatan ceramah.
Saya telahpun dihubungi pegawai penyiasat kes ini. Saya akan bekerjasama dengan pihak polis untuk siasatan lanjut. Saya berharap pimpinan tertinggi UMNO – Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Presiden UMNO, YB Khairy Jamaluddin selaku Ketua Pemuda UMNO dan YB Tan Sri Shahrir Samad selaku Ahli Parlimen Johor Bahru dapat menyatakan dengan jelas pendirian mereka menolak budaya samseng dalam politik.
(Video a: Di pintu masuk kedua Flat Sri Stulang di mana kenderaan kami dihalang dan ditendang, dan kemudian rombongan kami dihalang dan saya ditendang lelaki di dalam baju BN berwarna biru)
(Video b: Kami terus dihalang beberapa individu ketika kami cuba meninggalkan kawasan tersebut)
(Video c: Kami mengambil peralatan ceramah dengan diiringi pihak polis selepas membuat laporan polis)
Posted: 22 Jan 2013 01:27 AM PST
Putrajaya - Presiden Parti Bersatu India Malaysia (MUIP), Senator Datuk S. Nallakaruppan gagal dalam rayuannya bagi mengetepikan keputusan.(gambar fail)
Posted: 21 Jan 2013 09:55 PM PST
ယခု လတ်တလောတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် ပတ်သက်ပြီး မလိုမုန်းတီးသူများက ပုတ်ခတ်စော်ကားစာများကို ဒေသ အချို့တွင် ဖြန့်ဝေနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကရင်ပြည်နယ်ဘားအံမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့များတွင်လည်းကောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် စာမျက်နှာ(၂၀)ပါ စာအုပ်ပုံ သဏ္ဍာန်ဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ် ပုတ်ခတ်စော်ကားစာများကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြန့်ဝေလျက်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အချို့မြို့နယ်များတွင်လည်း လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းအမည် အမျိုးမျိုးတပ်ကာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ပုတ်ခတ်စော်ကားသော လှုံ့ဆော်စာများဖြန့်ဝေနေကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ News Watch (စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်)အတွဲ-ရ၊ အမှတ်(၇၂)တွင် သရ၀ဏ်(ပြည်) အမည်ဖြင့် "အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်ကွယ်သွားခြင်းအကြောင်း" ဆောင်းပါးကို ရေးသားရာတွင် သမိုင်းမှားများ၊ လုပ်ကြံ ဖန်တီးမှုများကို တမင်ပုံဖော်ရေးသား ကာ အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ် လွဲမှားသော အတွေးအမြင်များဖြင့် ထိုးနှက်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
အထက်ဖော်ပြပါလှုံ့ဆော်စာများနှင့် သမိုင်းမှားများရေးသားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုဝင်ဘာ(၂၃)ရက်က ကျင်းပသော အမျိုးသားလွှတ်တော်ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၅)ရက်မြောက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)မှ ဒေါက်တာ ဗညားအောင်မိုး၏ မေးမြန်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ၀န်ကြီး ရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်း၏ ဖြေကြားမှုကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မပြည့်စုံသောသမိုင်း သုတေသနဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေးအမြင့်ဖြင့် လိုရာဆွဲပြီး ကောက်ချက်ချပြောဆို ရေးသားခြင်း ကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ(၃၆၅)နှင့်ငြိစွန်းခြင်း၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကို ထိပါးခြင်း၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေးကို ထိပါးခြင်းအား မည်ကဲ့သို့တားဆီး ကာကွယ်ရမည်နည်း မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့မှ ပိုင်းခြားသုံးသပ် ဆန်းစစ်ခဲ့ရာတွင် ယုံကြည် ကိုးကွယ်မှုကို ထိပါးခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးကို ထိပါးခြင်းတို့မှ တားဆီး ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ (၃၆၅) တတိယအပိုဒ်တွင် ပါသည့်အခြား တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တစ်မျိုးကို ဖြစ်စေ၊ လူမျိုးများကိုဖြစ်စေ၊ ထိခိုက် နစ်နာစေနိုင်ပါက သက်ဆိုင်သူများ အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းပြီး ပြေလည်မှုရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စာတမ်းတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာသာသနာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ထုံးတမ်းတို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အချက်များပါဝင်ခြင်းရှိ၊မရှိ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာနက ကြိုတင်စိစစ်ပြီး လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တားဆီး ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ဖြေကြားပါသည်။
အလားတူပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် "ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ(၃၆၄)နှင့်ဆန့်ကျင်လျှင် မည်သို့ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်သည်ကို သိလိုကြောင်းမေးခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ(၃၆၄)အရ ယင်းပုဒ်မပါပြဌာန်းချက်များကို ဆန့်ကျင်သည့် အပြုအမူအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်သည့် ဥပဒေပြဌာန်းရခြင်း မရှိသေးသော်လည်း စာတမ်းဖတ်ပွဲ၌ စာတမ်းရှင်ဖတ်ကြားသည့် စာတမ်းသည် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ထိခိုက်စေသော အရေးအသား၊ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို စိတ်ဝမ်းကွဲစေသော အချက်များ ပါဝင်နေမည်ဆိုပါက စာတမ်းနှင့် သက်ဆိုင်သူတို့သည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းဖွယ်ရှိကြောင်းဖြင့် တင်ပြရှင်းလင်းသွားပါသည်။ ဒုတိယရှေ့နေချုပ်၏ ပြောကြားချက်၌ စာတမ်းဟုဆိုရာတွင် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာသာသနာကို ထိခိုက်စေသည့်စာတမ်း၊ ဆောင်းပါးများ ပါဝင်ပေသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ(၃၆၂)နှင့် (၃၆၃)တို့တွင် နိုင်ငံတော်က ခရစ်ယာန်ဘာ သာသာသနာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာ သာသနာ၊ ဟိန္နူဘာသာ သာသနာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သော ဘာသာတို့ကို နိုင်ငံတော်တွင် ရှိနေကြသော ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာများ ဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုသည်ဟု လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်သည် အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာ သာသနာများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်မည်ဟု လည်းကောင်း အသီးသီးပြဌာန်းထားပါသည်။
လူမျိုးရေးကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်သော် လည်းကောင်း တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်၊ တစ်ဂိုဏ်းနှင့် တစ်ဂိုဏ်းမုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း တစ်မျိုးမျိုးပေါ် ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော (သို့မဟုတ်) ပေါ်ပေါက်လာရန် အကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားမှုများ ရှိသော်လည်း ယခုအခါ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ မွန်ပြည်နယ် ၊မော်လမြိုင်မြို့၊ မန္တလေးမြို့နှင့် အချို့ဒေသများတွင် အစိုးရ မဟုတ်သော အသင်းအဖွဲ့အချို့က အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအပေါ် ဥပဒေပါအခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ကာ ဆန့်ကျင်ရေးသား၊ ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ လှုံ့ဆော်ပြောဆို၊ ဖြန့်ဝေနေခြင်းတို့ကို လက်ငင်းကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။
အထက်ပါအချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးမှ နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ အကြိမ်ကြိမ် မေတ္တာရပ်ခံတင်ပြခဲ့သော်လည်း ယခုတိုင် တစ်စုံတစ်ရာ ပြန်ကြားချက် မရရှိခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၃)ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးမှ ထုတ်ပြန်သည့်ကြေငြာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
လတ်တလော အခြေအနေတွင် နိုင်ငံတော်အပိုင်းမှ တစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များက မီဒီယာများတွင် သတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ သမိုင်းရေးရာများ ဖော်ပြသည့်အခါ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်၊ သတင်းမီဒီယာ ကျင့်ဝတ်များနှင့်အ ညီ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖော်ပြရန် လိုလားလျက်ရှိကြပါသည်။
ထို့အပြင်အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ် ဥပဒေပါ အခွင့်အရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့ကို ဆန့်ကျင်လျက် လှုံ့ဆော်စာများ ဖြန့်ဝေနေမှုကို နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင်းမှ ၀င်ရောက်ဖြန်ဖြေပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ရပါသည်။
ကိုးကား – ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
- ၂၄-၁၂-၂၀၁၂ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ
- ၂၃-၁၀-၂၀၁၂ထုတ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ ကြေငြာချက်
ကရင်ပြည်နယ်က သတင်းတွေ မကြားဘူးလား-
ရှမ်း-တာချီလိတ်ဘက်က သတင်းတွေ မကြားဘူးလား-
မွန်ဘက်ကသတင်းတွေရော ခင်ဗျားတို့ဆီ မရောက်ဘူးလား။
စီမံချက်က ဖေဖေါ်ဝါရီလကနေ စက်တင်ဘာလအတွင်း အပြီးလုပ်မှာ။
အားလုံးဖြစ်ပြီးရင် ကြံ့ခိုင်ရေးကနေ တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး
ဝီရသူ တောင် ဒီအစီအစဉ်မှာ အသုံးချပြီးမှ
ရခိုင်တွေရော သံဃာတွေရော ဗုဒ္ဓဘာသာပါ
ဒီတခါဖြစ်ရင် တကမ္ဘာလုံးက ဗမာဆိုရင်
တာလီဘန်တွေကိုဆက်ဆံသလို ဆက်ဆံတာခံရလိမ့်မယ်။ သင်္ဃန်းမြင်တာနဲ့
ကျုပ်တို့ဘက်ကထိမ်းဖို့ဆိုတာ မဟန က ကိုးလို့ကန့်လန့်ခံနေတယ်။
ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့ အစည်းတွေကနေ လုပ်ကြပါ-
Posted: 21 Jan 2013 10:21 PM PST
If you're easily offended, don't read this. I am posting this for laughs with no intention to offend anyone.
By Matt Groening (Creator of The Simpsons and Life in Hell)
HANDWRITING: To their credit, men do not decorate their penmanship.They just chicken-scratch. Women use scented, colored stationary and they dot their "i's" with circles and hearts. Women use ridiculously large loops in their "p's" and "g's". It isaroyal pain to readanote fromawoman. Even when she's dumping you, she'll putasmiley face at the end of the note.
CATS: Women love cats. Men say they love cats, but when women aren't looking, some cruel men kick cats.
*Haveanice day and keep smiling!
Posted: 21 Jan 2013 07:35 PM PST
From Yahoo News: Loyal dog continues to attend mass at church where owner's funeral was held
By Dylan Stableford, Yahoo! News | The Sideshow – 19 hrs ago
Izuan Zabid read this
loyal dog whose owner died late last year has apparently been
Posted: 21 Jan 2013 02:30 PM PST